DEG DEG:- Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo haatan kulan la qaadanaya xildhibaanada beesha Hawiye – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo haatan kulan la qaadanaya xildhibaanada beesha Hawiye
Ra’iisul wasaaraha cusub ee dhawaan lasoo magacaabay Xasan Cali Kheyre ayaa haatan bilaabay olole uu ku doonayo inuu kalsooni kaga helo xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya, isagoona haatan kulan xasaasi ah la qaadanayo xildhibaanada kasoo jeeda beesha Hawiye.
Kulankaasi oo haatan weli ka socdo xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, ayaa ah mid uu ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ku doonayo inuu codka kalsoonida kaga helo xildhibaanada kasoo jeeda beesha Hawiye.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa xildhibaanada beesha Hawiye ka codsaday inay codkooda kalsoonida ah siiyaan, isagoona u balan-qaaday inuu si cadaalad ah kula shaqeyn doonno islamarkaana uu diyaar u yahay wixii talo ah oo ay siinayaan.
Kulankaan oo ah kii ugu horeeyay uu ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre la yeesho xildhibaanada baarlamaanka ayaa la sheegayaa in xilliyadda soo socdo uu soo gaba-gaboobi doonno.
Dhinaca kale, warar hordhac ah oo ay warbaahinta Bulshoweyn ka heleyso kulankaasi haatan socda ayaa sheegaya in xildhibaanadaasi oo tiradooda gaareyso illaa 50 xildhibaan ay ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre u ballan-qaadeen inay codka kalsoonida ah siin doonaan.
Ugu dambeyntii, ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa laga sugayaa in markii uu helo codka kalsoonida ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib, inuu sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo dhiso xukuumad tayo leh oo ka tartumeeysa shacabka Soomaaliyeed.